Ukucela ubomi bomsebenzi: toll yasimahla: ungayenza njani inyathelo ngenyathelo | Ezezimali
Cela ubomi bomsebenzi: ifowuni yasimahla
Isatifikethi sobomi bomsebenzi, okanye ubomi bokusebenza ngokulula, luxwebhu olubonisa ixesha umntu ebesebenza ngalo, oko kukuthi, ubhalisile kuKhuseleko lwezeNtlalontle kwaye, ke ngoko, wenze igalelo. Olu lulwazi olubaluleke kakhulu ukwazi ukuba ngaba umqeshwa unelungelo, umzekelo, kwinzuzo yokungaphangeli, umhlala-phantsi, njl Ukufaka isicelo simahla ukongeza ekunikezeleni ngeendlela ezahlukeneyo kwimowudi yobuso ngobuso, kwi-Intanethi, ucela ubomi bomsebenzi ngefowuni yasimahla ...
Yinto yokugqibela esifuna ukuthetha nawe engezantsi kuba ayinguye wonke umntu onokuthi abe ne-Intanethi okanye abe nexesha lokuzimasa ubuso nobuso kunye noKhuseleko lweNtlalo. Ke, ukuba ufuna ukwazi ukuba ungacela njani ubomi bomsebenzi ngefowuni yasimahla, apha sixelela into ekufuneka uyenzile.
1 Yintoni ubomi bokusebenza
1.1 Yintoni esebenzayo ubomi
2 Iindlela zokubuza ubomi bomsebenzi
3 Cela ubomi bomsebenzi: ifowuni yasimahla
3.1 Cela ubomi bomsebenzi ngefowuni yasimahla: Tsalela umnxeba
3.2 Cela ubomi bomsebenzi ngefowuni yasimahla: Khetha ukhetho 4
3.3 Khetha uhlobo lomsebenzi wobomi
3.4 Lindela ingxelo
Yintoni ubomi bokusebenza
Ubomi bokusebenza, okwabizwa ngokuba sisatifikethi sokusebenza emsebenzini okanye isatifikethi sokusebenza emsebenzini, luxwebhu olusemthethweni, olukhutshwe nguNondyebo woKhuseleko lweNtlalo, apho yonke into enxulumene nomba wezabasebenzi iqulunqwayo, oko kukuthi, izivumelwano (eziphezulu nezisezantsi), ukukhubazeka, ukungabikho kwemisebenzi, iimeko ukwenziwa xa ukhupha umntu ...
Olu xwebhu lolobuqu, kwaye ngumnini kuphela onokulucela kuba luqulathe ulwazi lwabucala nolwahlukileyo ngalo mntu.
Yintoni esebenzayo ubomi
Ubomi bomsebenzi luxwebhu olusebenzisa izinto ezininzi. Ngapha koko, nangona eyona nto iqhelekileyo kukuba isetyenziselwa ukwazi ukuba inkampani ibhalisile na kubasebenzi, okanye ukubonisana nexesha lokunikezelwa kwaloo mntu malunga noKhuseleko lweNtlalo, inyani kukuba isebenza ngakumbi.
Ukubala ukuba ungasicela na isibonelelo sokungaphangeli, okanye ukungaphangeli, ngakumbi. Kwaye kufuneka ixesha elincinci legalelo ukufikelela koku.
Ukubala ukuba uyayilungela na ipenshoni yomhlala-phantsi.
Ukuqinisekisa ukuba inkampani ikubhalisile kuKhuseleko lweNtlalo.
Ukulungiselela naliphi na ikhefu elinokufuneka (ukukhubazeka okwethutyana, ukubeleka, ubuzala ...).
Ukuqinisekisa ukuba ukhuseleko lwezeNtlalontle lubalwe kubo bonke ubomi bokusebenza obenziwe ngumsebenzi. Ngaphandle koko, unokucela, ngokubhaliweyo, kwaye unikezele ngedatha enokubakho, ukubandakanywa kwemisebenzi engakhange ithathelwe ingqalelo (nokuba kungenxa yokuba indala, kuba inkampani ayibhalisanga ...).
Iindlela zokubuza ubomi bomsebenzi
Nangona sifuna ukugxila ekufundiseni ukuba ungasifaka njani isicelo sobomi bokusebenza ngefowuni yasimahla, asinakukuthintela ukushiya ezinye iindlela onokuthi ufake isicelo sobomi bokusebenza. Kwaye kukhuseleko lwezeNtlalontle ekubonelela ngeendlela ezine zokwenza (ukubala indlela yefowuni). Zezi:
Kwi-Intanethi. Ngeendlela ezintathu: ngedatha yomsebenzisi kwaye ngaphandle kwesiqinisekiso sedijithali; ngesatifikethi sedigital okanye i-DNI ye-elektroniki; ngePIN Cl @ ve.
Ngokwam kwii-ofisi zikaNondyebo Jikelele woKhuseleko lweNtlalo.
Ngamnye kubo unempawu ezithile ekufuneka zifezekisiwe ukufumana ubomi bokusebenza. Ngapha koko, sele sithethile ngezinye zazo ngaphambili, ke zinokusebenza njengesikhokelo ukuba ukhetho lomnxeba alulungelanga wena.
Ukucela ubomi bomsebenzi kwifowuni yasimahla kunokwenzeka, kwaye kunokukunceda uxinzelelo. Kodwa kuya kufuneka ukhumbule ukuba oku akukhawulezi, oko kukuthi, kuyakuthatha ixesha ude uyifumane, ke ukuba uyayidinga ngokungxamisekileyo, eyona nto ilungileyo kukuba ujonge izinto esele sikunike zona ngaphambili.
Kodwa ukuba ixesha alongxaki, amanyathelo ekufuneka uwathathe xa ucela ubomi bomsebenzi ngala alandelayo:
Cela ubomi bomsebenzi ngefowuni yasimahla: Tsalela umnxeba
Eyokuqala, kwaye ebonakalayo, ukucela ubomi bomsebenzi ngefowuni yasimahla kukufowuna ngomnxeba. Ngenxa yoku, ukhuseleko lwezeNtlalontle lwenze ukuba inani, eliyi-901502050. Ngoku, ingu-901, njengoko uyazi, ayikhululekanga, yiyo loo nto kucetyiswa ukuba, ukuba ufowuna, uyenze ngenani eliqingqiweyo. iindleko ezingaphantsi. Nangona kunjalo, kukho enye indlela.
Kwaye ungafaka isicelo sobomi bomsebenzi ngefowuni kwa-913878381. Akuyonto yasimahla nayo, kodwa kuthathelwa ingqalelo ukuba sineminxeba engenamda kwiminxeba yasendlini kunye nokuhambahamba, kunokuba simahla ukuba usebenzisa olu khetho lwesibini.
Ewe kunjalo, khumbula ukuba iiyure zeenkonzo zomthengi (nokuba ubiza eyokuqala okanye yesibini) isusela nge-9 kusasa ukuya kwi-7 emva kwemini, kwaye iya kufumaneka kuphela ukusuka ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu. NgeMigqibelo, ngeCawe nangeeholide ngekhe bazimase.
Enye into ekufuneka uyiqwalasele kukuba ukucela ubomi bomsebenzi ngomnxeba akukho kuwo onke amaphondo. Umzekelo, e-valava, e-Alicante, e-Avila, e-Barcelona, ​​e-Córdoba, e-Guipúzcoa, e-Granada, e-Santa Cruz de Tenerife, e-Soria, e-Valencia nase-Vizcaya akunakufumaneka ngale ndlela.
Cela ubomi bomsebenzi ngefowuni yasimahla: Khetha ukhetho 4
Xa bethatha umnxeba, eyona ixhaphakileyo kukuba ufumana ukurekhodwa. Xa uyimamele, uyakuqonda ukuba kufuneka ukhethe ukhetho 3 okanye 4 kwaye, ngalo mzuzu, kuya kufuneka uxele lonke ulwazi abalifunayo, njengenombolo yakho yoKhuseleko lweNtlalo, i-ID yakho okanye ipaspoti, idilesi kunye ikhowudi yeposi. Yiba nayo yonke into esesandleni ukuze umnxeba ungaxhomi kwaye kufuneka uqale kwangoko.
Khetha uhlobo lomsebenzi wobomi
Nje ukuba unikezele ngedatha, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba loluphi uhlobo lwengxelo yomsebenzi oyifunayo. Umzekelo, unokukhetha epheleleyo, nayo yonke imbali yakho yomsebenzi, enye inoluhlu lomhla, okanye ezinye izihluzi.
Umnxeba uya kube uphelile, kwaye ngoku kuya kufuneka ulinde iiveki ezi-1-2 ngaphambi kokuba ingxelo yakho yobomi emsebenzini ifike kwidilesi ebhaliswe nguKhuseleko lweNtlalo. Ngaba oko kuthetha ukuba ukuba ndinika enye idilesi ayizukundifumana? Ewe, mhlawumbi akunjalo.
Ngapha koko, kunokwenzeka ukuba xa unika idatha, ukuba bayabona ukuba ayisiyiyo le nto banayo kuKhuseleko lweNtlalo, bayakucela ukuba ulungise ulwazi abanalo ngawe, kuba, kungenjalo, baya kuyithumela ingxelo Idilesi abayaziyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Cela ubomi bomsebenzi: ifowuni yasimahla
Isatifikethi somyolelo wokugqibela